Sir doonka Pakistaan ISI oo qirtay ceeb - BBC Somali
Sir doonka Pakistaan ISI oo qirtay ceeb
3 Maajo 2011
Image caption Madaxweyne Obama iyo Madaxweyne Zardari
Haya'dda sirdoonka ee Pakistaan ee ISI ayaa sheegtay inay dareemayso ceeb wayn inay ogaan waayeen in hogaamiyaha Alqacida Osama Bin laden uu ku noolaa meel aad ugu dhow saldhiga wayn ee milatari ee Pakistaan.
Masuul katirsan hayadda sirdoonka ee Pakistaan ayaa sheegay in guriga Bin laden lagu dilay ay galeen askarta afganistaan 2003dii mar loo maleeyay in dad ka tirsan Alqacida ay ku jiraan guriga, laakiin tan iyo 2003dii guriga Osama Bin laden lagu dilay lama tuhmin.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhawaysay dilka Osama Bin laden iyadoo ugu yeertayhorumar muhiim ah oo laga gaaray la dagaalanka argagixisada.
Madaxweynaha Pakistan, Asif Ali Zardari, ayaa sheegay in dalkiisu aanu war ka heyn in halka Osama Bin Laden uu isku qarinayay, markii ciidamada Mareykanku ay ku dileen magaalada Abbottabad Axaddii.
War uu ku qoray wargeyska Washington Post, ayaa waxa uu ku sheegay in weerarka in aanu ahayn hawlgal si wada jir ah ay u fuliyeen Mareykanka iyo Pakistan, laakiin waxa uu intaa ku daray in uu ahaa toban sano oo wada shaqeyn ah midda keentay in la baabi'iyo hogaamiyihii al Qaacida.
La taliyaha Aqalka Cad ee ka hortagga argagaxisada, John Brennan, ayaa sheegay in inkastoo aan la qaadan karin in Osma bin Laden uu muddo sidaa u dheer uu joogay Pakistan isagoo aan wax taageero ah ka helin deegaanka.